သက်တမ်းရှည်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် မျော်လင့်ရမယ့် Fallout 76 – REDPlayer
Fallout game series တွေကိုအစဉ်တစိုက်ကစားလာတဲ့ gamer တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Fallout 76 မှာတော့ multiplayer ကိုအဓိကထားပြီး တော့ အမြဲတမ်း online ရှိနေဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီလိုအခင်းအကျင်းက အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။. ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း Bethesda ရဲ့ games-as-a-service ဆိုတဲ့ business model အရတော့ DLC တွေဆက်ထုတ်ပြီး gamer တွေကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လာနေအောင်ဆွဲဆောင်ထားဦးမှာပေါ့။ ဆိုပါတော့… မေးခွန်းက ဘယ်လောက်အချိန်ကြာကြာဆွဲဆောင်ထားနိုင်မလဲ? Bethesda ကတော့ “အဆုံးမရှိ” ဆိုပြီး ကြွားလုံးထုတ်ထားရဲ့။
Forever လို့ကြွားလုံးထုတ်နိုင်ရအောင် Bethesda ရဲ့ဂိမ်းတွေက ခိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း Fallout4ရဲ့ settlement နဲ့ Skyrim ရဲ့ အိမ်တွေမှာ ရှိနေကြတုန်းပဲမဟုတ်လား။ ဒါတောင် အဲ့ဒီ့ဂိမ်းတွေက နှစ်ရှည်လများဆော့ဖို့နဲ့ online လိုနေရာမှာရှိနေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။
တစ်ချို့တွေက ထုံးစံအတိုင်း Fallout 76 ကရော ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့သက်တမ်းလို ၂နှစ်လား အလွန်ဆုံး ၅နှစ်လားလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ ကြပါသေးတယ်။ ပြန်ဖြေထားတာကတော့ သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်နဲ့ ၇နှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်း၂ ခုကိုတောင် ဒီနေ့အထိ လူတွေဆော့နေကြသေးတာပဲ။ ဒါတောင် အဲ့ဒီဂိမ်းတွေက online အတွက်ထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။
Bethesda ရဲ့ Hines ကထပ်ပြောထားတာရှိပါသေးတယ်။. သူ့အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ Fallout 76 က သက်တမ်းရှည်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘယ်လိုပုံစံတွေလာမလဲတော့ သူလည်းမသိသေးကြောင်းနဲ့ အနာဂတ် trend တွေကတော့ game ရဲ့ community ဖြစ်တဲ့ gamer တွေအပေါ်မှာပဲမူတည်ကြောင်းပြောသွားပါတယ်။
Fallout 76 vault 76 [Bethesda]
နောက်တစ်ခုကတော့ အရင်ဂိမ်းတွေအကုန်လုံးမှာ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တွေရှိပါတယ်။. DLC တွေထွက်လာပြီးတဲ့ အထိ DLC တွေမှာလည်း အဆုံးသတ်တွေပါခဲ့ပါတယ်။. ဒါပေမယ့် gamer အများစုကတော့ Fallout လိုဂိမ်းမျိုးကို အဆုံးသတ်မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။. ဒါကြောင့်လည်း ဒီအချိန်မှာ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ် မပေးထားတဲ့ Fallout 76 ထွက်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Gamer တွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲတော့ လာမယ့် အချိန်တွေကပဲ စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
Fallout 76 ကတော့ လာမယ့် November မှာ PS4, Xbox One နဲ့ PC အတွက်ထွက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ October ထဲမှာတော့ Xbox One မှာ beta စပြီးရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ Xbox One X အဖြူရောင်များဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုရင် Fallout 76 Power Armor edition နဲ့တွဲပြီး bundle ဈေးနဲ့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Fallout game series တှကေိုအစဉျတစိုကျကစားလာတဲ့ gamer တှအေတှကျတော့ သတငျးကောငျးတဈခုဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတယျ။ အသဈထှကျရှိလာမယျ့ Fallout 76 မှာတော့ multiplayer ကိုအဓိကထားပွီး တော့ အမွဲတမျး online ရှိနဖေို့လိုလာပါလိမျ့မယျ။ အခုအခြိနျမှာ ဒီလိုအခငျးအကငျြးက အသဈအဆနျးတော့ မဟုတျတော့ပါဘူး။. ဒါပမေယျ့ သိတဲ့အတိုငျး Bethesda ရဲ့ games-as-a-service ဆိုတဲ့ business model အရတော့ DLC တှဆေကျထုတျပွီး gamer တှကေို အကွိမျကွိမျပွနျလာနအေောငျဆှဲဆောငျထားဦးမှာပေါ့။ ဆိုပါတော့… မေးခှနျးက ဘယျလောကျအခြိနျကွာကွာဆှဲဆောငျထားနိုငျမလဲ? Bethesda ကတော့ “အဆုံးမရှိ” ဆိုပွီး ကွှားလုံးထုတျထားရဲ့။
Forever လို့ကွှားလုံးထုတျနိုငျရအောငျ Bethesda ရဲ့ဂိမျးတှကေ ခိုငျတယျလို့ယူဆရပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုအခြိနျအထိ ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျလညျး Fallout4ရဲ့ settlement နဲ့ Skyrim ရဲ့ အိမျတှမှော ရှိနကွေတုနျးပဲမဟုတျလား။ ဒါတောငျ အဲ့ဒီ့ဂိမျးတှကေ နှဈရှညျလမြားဆော့ဖို့နဲ့ online လိုနရောမှာရှိနဖေို့ ရညျရှယျခဲ့သေးတာမဟုတျဘူးလေ။
တဈခြို့တှကေ ထုံးစံအတိုငျး Fallout 76 ကရော ဂိမျးတဈခုရဲ့သကျတမျးလို ၂နှဈလား အလှနျဆုံး ၅နှဈလားလို့မေးခှနျးထုတျခဲ့ ကွပါသေးတယျ။ ပွနျဖွထေားတာကတော့ သဘောကဖြို့ကောငျးတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၄နှဈနဲ့ ၇နှဈကထုတျခဲ့တဲ့ ဂိမျး၂ ခုကိုတောငျ ဒီနအေ့ထိ လူတှဆေော့နကွေသေးတာပဲ။ ဒါတောငျ အဲ့ဒီဂိမျးတှကေ online အတှကျထုတျခဲ့တာမဟုတျဘူးတဲ့ဗြာ။
Bethesda ရဲ့ Hines ကထပျပွောထားတာရှိပါသေးတယျ။. သူ့အနနေဲ့လောလောဆယျမှာတော့ Fallout 76 က သကျတမျးရှညျဂိမျးတဈခုဖွဈလာမှာ ဖွဈပွီးတော့ နောကျဆကျတှဲ ဘယျလိုပုံစံတှလောမလဲတော့ သူလညျးမသိသေးကွောငျးနဲ့ အနာဂတျ trend တှကေတော့ game ရဲ့ community ဖွဈတဲ့ gamer တှအေပျေါမှာပဲမူတညျကွောငျးပွောသှားပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ အရငျဂိမျးတှအေကုနျလုံးမှာ ဇာတျလမျးအဆုံးသတျတှရှေိပါတယျ။. DLC တှထှေကျလာပွီးတဲ့ အထိ DLC တှမှောလညျး အဆုံးသတျတှပေါခဲ့ပါတယျ။. ဒါပမေယျ့ gamer အမြားစုကတော့ Fallout လိုဂိမျးမြိုးကို အဆုံးသတျမလိုခငျြခဲ့ပါဘူး။. ဒါကွောငျ့လညျး ဒီအခြိနျမှာ ဇာတျလမျးအဆုံးသတျ မပေးထားတဲ့ Fallout 76 ထှကျလာတာဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Gamer တှရေဲ့ မှတျခကျြတှအေပျေါမူတညျပွီးတော့ ဘာတှဖွေဈလာမလဲတော့ လာမယျ့ အခြိနျတှကေပဲ စကားပွောပါလိမျ့မယျ။
Fallout 76 ကတော့ လာမယျ့ November မှာ PS4, Xbox One နဲ့ PC အတှကျထှကျရှိလာပါလိမျ့မယျ။ October ထဲမှာတော့ Xbox One မှာ beta စပွီးရနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ထူးခွားခကျြတဈခုကတော့ Xbox One X အဖွူရောငျမြားဝယျဖို့ အစီအစဉျရှိမယျဆိုရငျ Fallout 76 Power Armor edition နဲ့တှဲပွီး bundle ဈေးနဲ့ရနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Tags beta Fallout Fallout76 multiplayer Survival